Jobless Lucky Wheel winner 23.12.14 ﻿
Jobless Lucky Wheel winner 23.12.14
ချိတ်ဆွဲရန်စာတန်း: best cv prize promotion job in yangon work in myanmar cv builder cv help
We are happy to announce the on of the winner of our Jobless Lucky Wheel
The winner is Mr.Hein Htet Aung who has been working asaComputer Hardware Repair Specialist.
Congratulation for the winner, Mr.Hein Htet Aung for our promotion.
So, please fill out your CV the best on here not only to win the prize but also to get best job offers from the thousand of potential employers.
ကျွန်တော်တို့ www.jobless.com.mm မှ ယခုပြုလုပ်သော Jobless Lucky Wheel အတွက် ဆုရရှိသူကို ကြေငြာရသည့်အတွက် အထူးပင် ဝမ်းသာမိပါသည်။
ဆုရရှိသူမှာ Computer Hardware Repair Specialist အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောMr.Hein Htet Aung ဖြစ်ပါသည်။
ဆုရရှိသူများအတွက် အထူးပင် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါသည်။
ဆုများသာမက ကောင်းမွန်သောအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များ ရရှိနိုင်ရန် လူကြီးမင်းတို့၏ CV ကို here မှာဖြည့်ပါ။